काला टुरक्वेटा, मेनोर्कामा एक सुन्दर कोना | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | सुझावहरू, मेनोर्का
राम्रो गर्मी गन्तव्य हो बेलारिक टापुहरू, स्पेनको एक अभिन्न स्वायत्त समुदाय जुन भूमध्यसागरमा छ र जसको राजधानी पाल्मा हो। यी टापुहरूमा बहुमूल्य छ मेनोर्का, गिमनेसिया टापु मध्ये एक हो, र टापुको तटमा हप्काएको छ जुन तपाईंको अन्तिम गन्तव्य हुन सक्छ: टर्क्वेटा.
आज हामीले यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्नेछ राम्रो बीच, सानो र निलो पानी संग, गर्मी मौसम मा जबरदस्त लोकप्रिय। यो कहाँ छ, त्यहाँ कसरी पुग्ने, यसमा पार्कि has छ वा छैन, यसमा समुद्र तट पट्टी छ वा छैन, कहिले जानुहुन्छ ...
1 मेनोर्का र यसका आवरणहरू
2 काला टर्क्वेटा
3 काला टर्क्वेटामा कसरी पुग्ने
4 काला टर्क्वेटा र वरपर के गर्ने
मेनोर्का र यसका आवरणहरू
यो हो दोस्रो ठूलो टापु र बासिन्दाहरूको संख्या को हिसाबले तेस्रो। यो सानो छ, त्यसैले यसको नाम ल्याटिनबाट आएको हो, र राजधानी पूर्वी तटमा अवस्थित महन शहर हो। यसको प्राकृतिक सम्पत्तीको कारण the ० को शुरुवात पछि यो हो जैव क्षेत्र रिजर्व.
यसको 701०१ वर्ग किलोमिटर छ र उदाउँदो सूर्य हेर्न पहिलो स्पेनिश क्षेत्र हो, त्यसैले यदि तपाईं यस गर्मीमा जानुहुन्छ र सूर्य उदय देख्नुहुन्छ भने, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंले यो महादेशका सबै स्पेनहरू अघि गरिरहनु भएको छ। यो एक रमाईलो छ सामान्यतया भूमध्य मौसम र तिनीहरूको गर्मी धेरै तातो छैन।
मेनोर्का पर्यटनको विश्वमा बाँचेको बालेरिक टापुको बाँकी भन्दा थोरै पछि आयो किनभने यसको आफ्नै जनसंख्यालाई समर्थन गर्ने उद्योग थियो। तसर्थ, यसको परिदृश्यहरू अझ राम्रोसँग सुरक्षित गरिएको छ र त्यसैले यो बायोफियर रिजर्भको रूपमा यसको बप्तिस्मा। यसलाई बनाउनको लागि आज सबै थप्दछ लोकप्रिय गर्मी गन्तव्य ब्रिटिश, डच, इटाली, जर्मन र अधिकका लागि।
मेनोर्कामा धेरै समुद्री तटहरू छन् तर काला टुर्क्वेटा सबैभन्दा सुन्दरको बीचमा छन्, यदि सब भन्दा सुन्दर छैन भने, र सबैभन्दा लोकप्रिय मध्ये एक हो। यदि तपाईंलाई व्यक्ति मनपर्दैन भने यो राम्रो गन्तव्य नहुन सक्छ तर यदि यो हुन्छ भने र तिनीहरूलाई चिन्न किनभने तपाईंले तिनीहरूलाई मिस गर्न सक्नुहुन्न।
यो अवस्थित छ टापुको दक्षिण तटमा र यो एक समुद्र तट हो राम्रो सेतो बालुवा र नीलो पानी। छायाaद्वारा प्रदान गरिएको हो पाइन ग्रोभ कि सुरक्षा घेराको साथ उनको वरिपरि क्याक्रेरियस चट्टानहरू। यो दक्षिण तटमा एक्लै छैन, त्यहाँ दुई अन्य समुद्र तटहरू छन्, र यद्यपि टर्क्वेटा तीनमा लोकप्रिय छ तर यो कम से कम अक्सर हुन्छ। वा त्यसोभए तिनीहरू भन्छन्। यदि हामीले यसलाई राम्ररी हेर्छौं भने ती हुन्छन् दुई साना समुद्री तटहरू सँगै तर एउटा चट्टानी प्रोमन्टोरीबाट अलग गरियो।
पहिलो भाग सबैभन्दा ठूलो हो र यो धारको मुखमा भएकोले बालुवा सँधै ओसिलो हुन्छ। पाइन अन्तर्गत त्यहाँ केहि पिकनिक तालिकाहरू र केहि समतल चट्टानहरू हुन्छन् जसमा व्यक्तिहरू बसोबास गर्छन्। यदि तपाईंले पाइन जंगललाई पार गर्नुभयो भने तपाईं अर्को समुद्र तट पार गर्नुहुनेछ, सानो र केही टिब्बा पछाडि।
तिमीलाई थाहा छ किन यसलाई टुरक्वेटा भनिन्छ? नाम पानीको रंगबाट बहाव यो एक नरम फ़िरोज़ा जस्तो देखिन्छ। अन्त्यमा, कसरी यो उन्मुख छ, यो एक समुद्र तट हो घाम चाँडै समाप्त हुन्छ त्यसैले यो छिटो खाली गर्दछ। त्यसकारण, सूर्यास्त बिताउनको लागि राम्रो स्थान हो। चिन्ता नगर।
काला टर्क्वेटामा कसरी पुग्ने
कोभ यो सिउटाडेला डे मेनोर्काबाट १ 14 किलोमिटर टाढा छ। यदि तपाईंसँग कार छैन तपाईंले बस लिनु पर्छ यस बिन्दुबाट तपाईंलाई छोड्नुहोस्। गर्मी मा यो छ लाइन १ र बसले तपाईंलाई बीचको पार्कि lotमा छोड्छ। यदि तपाईंसँग कार छ भने तपाईं सन्त जोन डे मीसा सडक दक्षिण र यसको समुद्री किनारमा लिनुहुन्छ।
सन्त जोआन डे मीसा हर्मेटेजको उचाईमा, दाँया घुम्नुहोस् र सीधा बाटो कोवमा लिनुहोस्। तपाईं चार किलोमिटरको यात्रा गर्नुहुन्छ र फेरि एक अप्रशोधित सडकमा फेर्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई पार्किंगमा छोड्छ। र त्यहाँबाट तपाई समुद्रमा लगभग १० मिनेट हिड्नुहुन्छ।
सावधान रहनुहोस् कि यदि तपाइँ गर्मी मौसमको मध्यमा जानुहुन्छ भने यस्तो हुन सक्छ कि त्यहाँ धेरै मानिसहरू कार छन् र पार्कि lot भरिएको छ। त्यहाँ जानु भन्दा अर्को विकल्प छैन तर अर्को समुद्र तटमा अर्को ठाउँ हेर्नका लागि। भाग्यले त्यहाँ स signs्केतहरू छन् जुन तपाईंलाई बताउँछ कुन पार्किंग भरिएको छ विचलित नहुनुहोस्।
काला टर्क्वेटा र वरपर के गर्ने
टापु सानो छ र यसको वरिपरि जाने उत्तम तरिका भनेको ऐतिहासिक ट्रेललाई पछ्याउनु हो २० साईनपोस्टेड स्टपहरू जुन सम्पूर्ण तट रेखा पार गर्दछ। त्यसको बारेमा क्यामे डे क्याभल्स, एउटा पुरानो मार्ग जुन टापुको रक्षा गर्न प्रयोग गरिएको थियो र त्यो १ century औं शताब्दीको पहिलो आधामा आकार लिन्छ। यो पुन: जीर्णोद्धार पछि, २०१० मा सार्वजनिक सडकको रूपमा खोलिएको थियो १ 185 XNUMX किलोमिटर यात्रा गर्नुहोस् कुल।
मैले भनेझैं २० स्टप छ त्यसोभए तपाईं यसलाई अन्त्यबाट अन्त्यसम्म गर्न सक्नुहुनेछ वा प्रत्येक स्टेशनमा रोकिन्छ वा तपाईंको आफ्नै सेक्सनहरू चित्रण गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं यसलाई पूरै दिन समर्पित गर्नुहुन्छ भने तपाईं समस्या बिना यो गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं बिहान जानुहुन्छ र दिउँसो फिर्ता प्रयोग गर्नुहुन्छ। यो उत्तरी तटमा माऊबाट सिउटाडेला र दक्षिण तटमा सियुटडेलाबाट माउसम्म दस चरणमा दश चरणमा बित्छ। लिनुहोस्, हो, पानी, खाना, चश्मा, टोपी र आरामदायक जुत्ता।
काला टुर्क्वेटा कामदेव डे काभल्सको दुई चरणको सुरू र अन्त हो। नजिकैको काला गलदाना, काला मकारेला र मकारेलेटा हो। यदि तपाईं पश्चिम जानुभयो भने, तपाईं केप आर्ट्रुटक्स, एस टालेयर कोभ र सोन सौराको समुद्र तटहरूमा पुग्नुहुनेछ, जुन पाँच किलोमिटर टाढा छ। यी समुद्री किनारहरूमा ठ्याक्कै हिड्दै, टर्क्वेटाबाट, तपाईंले एउटा पथ फेला पार्नुभयो जुन तपाईंलाई पुरानो डिफेन्स टावरमा लैजान्छ जुन तपाईंलाई शानदार पानोरमिक दृश्यहरू प्रदान गर्दछ।
उद्देश्यका लागि: Es Talaier १.1 किलोमिटर, Cala Macarelleta १.3 किलोमिटर, Macarella १.1.7 किमी, Son Saura २ किमी र Cala Galdana 1.9 किमी छ। यदि तपाईं ग्रीष्म goतुमा जानुहुन्छ भने तपाईं सिउटाडेलाबाट डु boat्गाबाट पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, भ्रमणहरू बिहान, दिउँसो र दिउँसो आयोजित गरिन्छ।
अन्तमा, केहि सिफारिसहरू: यो सब भन्दा चाँडो पुग्न राम्रो हुन्छ यदि तपाईंको अभिप्राय दिन खर्च गरी सूर्यास्तमा जान्छ भने। यो एक लाइफगार्ड र बाथरूमको साथ समुद्र तट हो नजिकै र हो, यो पार्किंग स्थल मा एक सानो बीच बार छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » मेनोर्का » काला टुरक्वेटा, मेनोर्काको सुन्दर कुनामा